Rabshado Ka Dhacay Masjid Al-Aqsa |
Quduz (GNN):- Rabshado ayaa maanta ka dhacay gudaha masaajidka barakeysan ee Al Aqsa ee magaalada Qudus, kaddib marki ay ciidamada booliska Israil gudaha u galeen, xilli ay halkaasi ku cibaadeysanayeen boqolaal Muslimiin Falastiiniyiin ah.
Iskudhacyada ayaa ka danbeeyay kadib marki ay ciidamada booliska u ogolaadeen in ay masaajidka Qudus gudaha u soo galaan boqolaal Israailiyiin ah oo u dabaaldagaya Maalinta Juruselam oo ah maalinta ay ciidamada Israil xooga ku qabsadeen bariga magaalada Qusud sannadki 1967-ki, kaddib dhamaadkii dagaalki Israil iyo dalalka Carabta.
Booliska ayaa sheegay in dadki ku jiray masaajidka ay xireen albaabada, kaddibna ay billaabeen in ay dhagxaan iyo kuraas soo tuuraan.
Jimciyadda Waqf ee maamusha masjidul Aqsa ayaa sheegtay in booliska Israil ay rasaas caag ah iyo babsaaska la buufiyo u adeegsadeen muslimiinti ku cibaadeysanayay masaajidka.
Afhayeenka booliska Israil ayaa sheegay in xaaladda ay caadi kusoo laabatay, isla markaana ay wali socoto booqashada ay dadka Yahuudda ah booqanayaan masaajidka.
Sannadkaan ayaa waxaa isku soo beegmay maalmaha ugu danbeeya ee bisha barakeysan ee Ramadan oo ay si aada ah masaajidka Al Qudus u camiraan Muslimiinta iyo maalinta ay dadka Yahuuda ah u dabaaldagaan maalinta ay qabsadeen Bariga Qudus.